September 8, 2020 September 8, 2020 adminLeaveaComment on बेरो`जगार टेम्पो चालकले ति,र्न सकेनन् घरभा,डा, घरबेटीले बोलाए प्र,हरी
कमलपोखरी बस्ने ५३ वर्षीय ललितबहादुर सुनुवार वि`गत १६ वर्षदेखि इमाडोल–रत्नपार्क रूटमा टेम्पो चलाउँछन्।
साहुको टेम्पो चलाएरै कमा`एको मा,सिक ३०–३५ हजार रूपैयाँले परिवार पाल्दै आइरहेका थिए। छोरोलाई पनि टेम्पो समि,तिकै र`सिद का`ट्ने ठाउँमा जागिर लगाइदिएपछि उनको बो`झ धेरै घ`टेको थियो। को`रोना म`हामा`री सं`क्रमण निय`न्त्रण गर्न सरकारले लकडा`उन गरेपछि भने उनको घरमा सबै आयश्रो`त ठ`प्प छ।
‘अब न छोराको रोज`गारी छ न मेरो। महिनाको १० हजार रूपैयाँ को`ठा भा`डा ति`~र्नु त परै जाओस्, ग्यास-चामल किन्ने पैसा समेत छैन,’ सुनुवारले भने। पैसा तिर्न नसक्दाको बोझ त छँदै थियो। त्यसमाथि झ`मेला पनि थपियो। लामो समयसम्म घरभाडा तिर्न नसक्दा घरबेटीले प्रहरी नै बोलाइदिए। ‘कमाइ नभएपछि भाडा कसरी ति`र्नु? भा`डा नतिरेको भन्दै घरबेटीले पुलिस नै बो`लाइदिए। बल्लतल्ल ऋ`ण जो`हो गरेर २ महिनाको दिएँ। अझै ४ महिनाको तिर्न बाँकी छ,’ सुनुवारले भने, ‘अब फेरि दुई दिनपछि भा`डा मा`ग्न आइपुग्छन्।
दिने कुनै बाटो छैन। फेरि पुलिस लिएर आउने हो कि? के गर्ने हो, मैले केही सोच्नै सकेको छैन। अब भगवान भरोसा।’
उनको घरमा एक सि`लिन्डर ग्या`स र रास`नको नाममा १ बोरा चामल मात्रै बाँकी छ। ‘समितिले रा`हत त दिएको थियो तर त्यसले कति दिन धान्छ र! बरू काम गर्न पाए कसैले दिएको राह`त चाहिन्थेन,’ सुनवार भन्छन्। उता, बुढानिलकण्ठ बस्ने ३० वर्षीय शिव श्रेष्ठको अव`स्था पनि लगभग उस्तै छ।
वैदे,शिक रोज,गारी सिलसिलामा ३ वर्ष बहरा`इन र २ वर्ष दुबई बसेपछि नेपालमै केही गर्छु भनेर फर्किएका थिए उनी।
साथीभाइको सल्ला`हअनुसार विदेशमा पसिना बगाएर कमा`एको पैसा ‘हा`यस’ माइ`क्रोमा लगा`नी गरे। वि`गत ५ वर्षदेखि उनले बुढा,निलकण्ठ–सुन्धारा (एनएसी) रूटमा गाडी चलाउँदै आएका छन्। गाडीबाट कमा`एको पैसाले बैं,कको कि`स्ता तिर्न, आफ्नो चार जनाको परिवार ख`र्च, औ,षधि-उपचार सबै धानि`एको थियो।
लकडाउ,नपछि भने उनको परिवारको यो एक मात्र आयस्रो`त रोकियो। केही समयसम्म ब`चत पैसाले चलिरहेकै थियो। तर, अहिले आर्थिक स्थि`ति नाजु`क बनिसकेको छ। ‘चैतदेखि को`ठा भा`डा ति`रेको थिइनँ। केही दिनअघि एउटा सह`कारीबाट ऋ`ण लिएर जेठसम्मको भा`डा ति`रेँ। रा`सन पसलमा राम्रो चि`नजा`न भएकोले ३५–४० हजारको उधा`रो भइसक्दा पनि मा`ग्नु भएको छैन। उहाँहरूले पनि सधैं उधारो दिन कहाँ सक्नुहुन्छ र,’ उनी भन्छन्। स्थानीय नि`कायले राह`त बाँडेका बेला ला`इन लाग्दा समेत नपाएको उनको दु`खे`सो छ।
‘स्थानीय प्रतिनि`धिहरूले याता`यात मज`दुरलाई संग,ठनले दिन्छ भनेर मलाई दिनुभएन। याता`यात मज,दुर संग,ठनले नदिएको पनि होइन। आधा बोरा चामल, एक किलो नुन, तेल लगायत पाएको थिएँ। खाने मुख चार वटा छ, त्यतिले कसरी पुर्‍याउनु,’ श्रेष्ठ भन्छन्। नेपाल याता`यात व्यव`सायी राष्ट्रिय महा`सघंका महासचिव सरोज सिटौलाका अनुसार नेपालमा हाल १० लाख याता`यात मज`दुर छन्। त्यस्तै यी मज`दुरमा आ`श्रित परिवार स`दस्य करिब ४० लाख छन्।
यी मज,दुरमध्ये ६० देखि ७० प्रति`शत वि`गत ६ महिनादेखि बेरोज`गार रहेको उनले बताए। मज,दुर र याता`यात क्षेत्रको करिब १० खर्ब रूपैयाँ ल`गानी जो`गाउन विदेशको अभ्यास हेरेर सार्व,जनिक याता,यात खुला गर्नुपर्ने उनको त,र्क छ। ‘सार्वज,निक याता,यातमा ७० देखि ८० प्रतिशत बैंक तथा वि,त्तीय संस्थाको लगा,नी छ। हामी सि,द्धियौं भने या,तायात मज,दुर मात्र होइन बैंक पनि डुब्छ। बैंक डुब्यो भने मुलु,कको अ,र्थत,न्त्र नै त,हसन,हस हुन्छ। सिटौलाले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार याता,यात व्यव`सायीहरू गाडी सर्भि`सिङ गर्न सक्ने स्थितिमा समेत छैनन्। ‘लकडाउ`नको ३ महिनापछि सरकारले काठमाडौं उप`त्यका र बाहिर सम्बन्धित जि`ल्लाभित्र मात्र सार्वजनिक सवारी चलाउन दिने निर्ण`य गर्‍यो। व्यव,सायीहरूले ४ लाखसम्म ख´र्च गरेर गाडी बनाए। फेरि निषे`धाज्ञा सुरू भयो। गाडी पुनः जीर्ण हुन लागिसक्यो,’ उनले भने देशमा अधिकां`श याता`यात मज`दुरको स्थिति दय`नीय भएको नेपाल याता`यात स्वत,न्त्र मज`दुर संगठ`नका केन्द्रीय
अध्यक्ष भीम ज्वा`ला राई पनि बताउँछन्। याता`यात मज`दुर पनि दै`निक ज्या`लादारी जस्तै भएकाले एक हप्ता मात्र काम नपाउँदा पनि आर्थिक संक`ट आइपर्ने राईले बताए। ‘मज`दुरका लागि यो ६ महिना ६ वर्ष बरा,बर भएको छ। धेरै जना यो क्षेत्रबाट पला`यन भइसके। स्थिति यस्तै रह्यो भने भोलि सा`मान्य हुँदा पनि याता`यात मज`दुरलाई ख`डेरी लाग्छ,’ राईले भने, ‘अहिले याता,यात मज,दुरले कोठा भा,डा, खा`द्यान्न, औ,षधि लगायत आधा`रभूत आव,श्यकता समेत पूरा गर्न सकेका छैनन्। अझै सो`चिएन भने कति ज`टिल बन्दै जाला।’ सेतोपाटि बाट